Ice Ukulinganisa Izixhobo
Inkqubo yokupholisa ikhonkrithi epheleleyo
Fujian ikhephu co. LTD 1 kwiCh ...
Gcina imifuno ngomkhenkce oshushu
Umkhenkce weflake: isisombululo sendalo iphela kwizicelo ezininzi kushishino lokutya, kodwa nakwimizi-mveliso, izibhedlele kunye nokuzonwabisa! Iflake Ice Feature • Yenziwe ngokuthe ngqo kubushushu obuphantsi, iqabaka ibanda njengokuvuthuza-8 ℃ • Xa sele yenziwe, amaqhekeza omkhenkce ayomile, acocekile, amile kakuhle, acocekile kwaye alula ...
2021 Umboniso wefriji yase China
Umxholo we-2021 China uMboniso weFriji ngu "Ukomeleza isiseko, umgangatho wokuqala, ulungelelwaniso lwangaphakathi nolwangaphandle, uphuhliso lwekhabhoni ephantsi". Iqela leSnowman labelana ngomxholo wethu "wokujikeleza kabini", "ukungathathi hlangothi kwekhabhoni", "ipateni entsha", "phantsi kwale meko intsha", kunye ne "refrig ...
Ukubalulwa komatshini weqhwa le-Snowkey
● Uyilo lwenkqubo ekhethekileyo yamanzi luqinisekisa umgangatho weqhwa ongcono, kwanobukhulu, ukungafihli nto kunye nokusulungeka. ● Umenzi weqhwa uyilelwe kwaye wenziwa ngokomgangatho woxinzelelo wenqanawa, uqinile, ukhuselekile kwaye unokwethenjelwa. ● Iityhubhu zokuhambisa ubushushu ezifanelekileyo ziyamkelwa ukuze zilungiselele uyilo lwefri ...
Ukufakwa kwetyhubhu yomatshini weqhwa
1. Amanyathelo okuphakamisa nokukothula kuba umzimba womatshini womkhenkce unzima kakhulu, sifuna ukuba abasebenzisi bethu babonelele ngezixhobo zokuphakamisa kunye nezothutho ngexesha lokothula kunye nokuhamba ngokungqinelana nale miyalelo ilandelayo: 1) Ngelixa ukothula umatshini womkhenkce kulolo hlobo izithuthi njengeveni ...
Block umatshini ice ngumenzi ice, yahlulwe okupholisa ngqo ibhloko umatshini ice kunye netyuwa umatshini ice umatshini ice. Iibhloko zomkhenkce ezivelisiweyo zinobungakanani obukhulu phakathi kweemveliso zomkhenkce. Umkhenkce webhloko mkhulu ngobukhulu, kubushushu obuphantsi, akukho lula ukunyibilika, kulula ukuhambisa, kunye nokugcina ixesha elide ...
YENZA NJANI I-ICE BLOCK?
Umatshini weqhwa weBloko weqhwa Amanzi agalelwa kumbumba omkhulu wesinyithi kwaye abekwe kwitanki enkulu equlathe i-brine ebandayo ukuya kuthi ga kwiiyure ezisi-8. Xa ibhloko ebandayo iqabile ngokupheleleyo, iyasuswa etankini ize ifakwe emanzini ashushu. Oku kuyanyibilika umphezulu ...
INGABE INTLANZI INGAGCINWA NJANI?
Ukwenziwa kokutyiwa kokutya kwaselwandle kwi-Snowkey kuqala kwangoko ukubanjwa kweentlanzi. Ukutsha kuya kulahleka msinyane. Nangona kunjalo, zombini iintsholongwane kunye ne-autolytic spoilage zenzeka kakhulu kumaqondo athile obushushu, umzekelo, ibhaktiriya kunye nee-enzymes kwintlanzi ezisuka emanzini abandayo, zilungelelaniswe namaqondo obushushu elwandle aphakathi ko-5 ° C- 10 ° C. ...
Amanzi okwenza umkhenkce kwishishini lokuloba
Umkhenkce kufuneka usoloko usenziwa ngamanzi alungele ukuselwa. Amanzi angafanelekanga ukuwasela aya kuba neencukuthu eziyingozi kwimpilo yethu. Oku kuyosulela iintlanzi njengokuba umkhenkce unyibilika. Xa amanzi amatsha enqabile okanye engafumaneki, endaweni yawo kunokusetyenziswa amanzi olwandle. Nangona kunjalo, pro ...
Yeyiphi indlela echanekileyo yokusebenzisa umkhenkce xa usenza intlanzi?
I-Snowkey Flake Ice Machine yeNtlanzi i-iced ngenxa yezizathu ezibini: • Ukususa ubushushu entlanzini kwaye ukubupholise uye kwi-0 ° C; • Ukususa ubushushu obungena kwisikhongozeli sentlanzi kwindawo engqongileyo. Nangona kunjalo, ixesha kufuneka livunyelwe ukuba iintlanzi zilahlekelwe bubushushu. Ngapha koko, umgama omkhulu wentlanzi ukusuka ...
Ammonia Vs. UFreon
1. Izixhobo zoTyalo-mali Ngokubanzi, utyalo-mali lokuqala lwefriji enkulu kunye naphakathi kwefriji yeammonia iphakame kancinci xa kuthelekiswa nenqanaba elifanayo lenkqubo yefriji yefriji. 2. Ixabiso lokusebenza kwexabiso le ammonia lisezantsi, amandla efriji ...
Zeziphi iingxaki ezinokubakho ngexesha lokugcinwa komkhenkce ngaphandle kwenkqubo ezenzekelayo?
Ukugcinwa kweqhwa okuqhelekileyo Icebo Uninzi lweengxaki kugcino lomkhenkce zivela ekubumbaneni nasekudibaneni kwamasuntswana omkhenkce. Oku kuvelisa ii-clumps ekunzima ukuzisingatha. Ngaphandle kweempembelelo zomkhenkce omanzi okhankanywe apha ngasentla, i-fusion inokwenzeka ngenxa yoxinzelelo. Ukuthintela ezi ngxaki kuluncedo ukukhumbula ...